F-Droid: Yintoni kwaye yenzelwe ntoni? Ugcino lweSoftware yasimahla-Ikkaro
yokuqalisa >> software >> Android >> Yintoni i-F-Droid
Ndiyavuya ukuba ndiyifumene kwaye ndazama le app. Ndicinga ukuba kuhle kakhulu kwaye kunempilo ukuba kukho ezinye iindlela ezivulekileyo kwi-Play Store nakuyo nayiphi na i-corporation enkulu esebenza njenge-counterweight ukukhusela u-monopoly wabo ekubekeni iimeko abaziqwalaselayo. Ke wamkelekile kwi-F-Droid kunye nazo zonke iindawo zokugcina ofuna ukuzenza.
Kuzo zonke iiprojekthi ezisekwe kwisoftware yasimahla, efana neLinux, ukhuseleko lwayo luselubala. Kuba kukho amawaka abantu abaphuhlisa kwaye baphonononge ikhowudi, bezama ukuyiphucula kunye nokubika iingxaki kunye nokuxhatshazwa ukuba kukho na.
Yiyo loo nto kudla ngokuthiwa ikhuselekile kuneVenkile yePlay, apho ngabahleli bakaGoogle bavuma iiprojekthi kwaye akukho mntu unokuphonononga ikhowudi yabo, ubuncinci ngokulula. Isicelo esikhohlakeleyo sinokuvela apha, ude usifumane, kodwa masikhumbule ukuba iimeko zosetyenziso oluyi-malware kwaye ezinamawaka okanye amashumi amawaka abosulelekileyo zixelwa ngokuqhubekayo kwiVenkile yePlay, ngenxa yokhuseleko lobuxoki olufunyanwa ngabantu. kulo ndawo yokugcina.
Uyifaka njani iF-Droid
Ukuze ufake i-F-Droid, kufuneka uqale uvule i-Android ukhetho lwe-Vumela ukufaka izicelo kwimithombo engaziwayo, efumaneka kwiSeto> icandelo loKhuseleko.
Unenyathelo ngenyathelo inkcazo kwinqaku kwi Uzifaka njani ii-apk zokusebenza kwi-android.
Nje ukuba olu khetho luvulwe, luvalwa ngokungagqibekanga. kufuneka uye kwi Iwebhusayithi yeF-Droid kwaye ukhuphele i-app. Kubaluleke kakhulu ukuba uyikhuphele kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye ungayikhupheli kuyo nayiphi na enye indawo.
Ngesicelo esikhutshelweyo, kufuneka siye kuphela kuKhuphela kwi-smartphone yethu kwaye ucofe kuyo ukuze uyifake.
Ukuba ufuna inyathelo ngenyathelo jonga kwinqaku endilishiyile ngasentla.
Ngokungafaniyo neVenkile yePlay, akufuneki sibhalise okanye senze iakhawunti ukuze sisebenzise indawo yokugcina. Kwaye njengoko benditshilo zonke izicelo zisimahla. Batsho njani kwiwebhusayithi esemthethweni:
I-F-Droid iyabuhlonipha ubumfihlo bakho. Asikulandeli wena okanye isixhobo sakho. Asiyilandeli into oyifakileyo. Awudingi akhawunti ukusebenzisa umxhasi, kwaye umxhasi akathumeli nayiphi na idatha yokuchonga eyongezelelweyo xa unxibelelana neeseva zethu zewebhu, ngaphandle kwenombolo yayo yoguqulelo. Asikuvumeli nokuba ufake ezinye ii-apps ezisuka kwindawo yokugcina umkhondo, ngaphandle kokuba uqale wenze ukhetho "lokulandela" kwicandelo. AntiFeatures kwezikhethwayo
Xa sijonga izicelo ngaphakathi kwe-F-Droid siya kubona ukuba ezinye ziphawulwe njenge Iyaphikiswa. Oku kungenxa yokuba inokuthwala into ethile abangayithandi abasebenzisi, oko kukuthi, iNtengiso, okanye ukuxhomekeka kwesoftware. Ukuba uvula inkcazo icacisa ukuba yeyiphi imiqathango ecinga ngayo impikiswano kweso sicelo kwaye sele ugqibe ekubeni uyifake.
Umsebenzi onomdla kakhulu kukuba sinokufaka izicelo ngaphandle kokuba ne-Intanethi, kuba sinokutshintshana izicelo kunye nenye i-Android ene-F-Droid, edibanisa ngeBluetooth okanye i-WIFI kwesinye isixhobo.
Izicelo: Ndiyisebenzisela ntoni?
Kuphela malunga ne-3 lamawaka ezicelo xa kuthelekiswa ne-3 yezigidi kwi-Play Store (zombini idatha ukususela ngoJanuwari 2021). Kwaye uninzi lwezicelo onokuzifumana kumaqonga omabini. Abanye kuphela kwi-F-Droid.
Kudala ndiyisebenzisa kodwa ndiyithanda ngakumbi nangakumbi. Ekuqaleni ndayifakela ukusebenzisa i-KeePass, umphathi odumileyo wegama eliyimfihlo kwaye ndikwazi ukuyingqamanisa nePC.
Emva koko ndifake iSyncthing ukuvumelanisa iifolda phakathi kwezixhobo kwaye ekugqibeleni ndivavanya i-OsmAnd+ enye indlela kwiiMephu zikaGoogle ngedatha enikezwe yi-OpenStreetMaps.
Ukuba ufuna ukubona ezinye ze ezona izicelo ezinomdla zoku indawo yokugcina ndikushiyile inqaku ngokhetho olunomdla.
Enye yeenzuzo eziphambili zokusebenzisa i-FDroid, ukongeza ekusebenziseni usetyenziso olungafumanekiyo kwiVenkile yePlay, kukukhupha iitrackers abazifaka kuthi.
Izizathu zokusebenzisa i-F-Droid
Apha ndifuna ukushiya izizathu ezahlukeneyo zokusebenzisa i-F-Droid.
Ukhuseleko Lonke ukhuseleko olunikezelwa yiSoftware yasimahla kunye noMthombo oVulekileyo
Ubumfihlo. Izicelo ngaphandle kokulandelela, apho yonke ikhowudi yazo iyaziwa kwaye siyazi kakuhle into abayenzayo.
Bheja kwiSoftware yasimahla. Indlela yokusebenzisana neSoftware yasimahla
Unceda njani uF-Droid
Kukho iindlela ezininzi zokufaka isandla kwiprojekthi ukuba ufuna ukuba iqhubeke iphucuka, ikhula kwaye yongeza ezinye iimpawu.
Iminikelo. Le yeyona ndlela ithe ngqo. Ukunikela ngemali kumbutho esikhumbula ukuba awuyongeniso. Kuyenzeka nokuba wenze iminikelo kwizicelo, kodwa ngoku sisebenzisana nabaphuhlisi besicelo hayi ngeF-Droid.
Ukusebenzisana ngokukhutheleyo kuphuhliso. Njengoko isoftware yasimahla, unokubandakanyeka ekuphuhliseni nasekuphuculeni iprojekthi ngokucwangcisa, ukuguqulela, ukuvelisa amaxwebhu, njl.
Yinike ukusasazwa. Mhlawumbi yeyona ndlela ilula. Kwaye ibandakanya ukuthetha malunga neprojekthi kubantu obaziyo kunye nokwabelana ngayo.
izigaba Android Ukuhamba kwetikiti
2 Uyifaka njani iF-Droid
3 I sebenza njani
4 Izicelo: Ndiyisebenzisela ntoni?
5 Izizathu zokusebenzisa i-F-Droid
6 Unceda njani uF-Droid